Igbo, John: Lesson 086 - Atọ n'Ime Otu na-adabere na ndị kwere ekwe site n'aka Onye Nkasi Obi (Jọn 14:12-25) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 086 (The Holy Trinity descends on believers)
12 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, Onye na-ekwere na m, ọrụ m na-arụ, ọ ga-emekwa; ọ gēme kwa ihe kariri ndia, n'ihi na anamalakuru Nnam.
Ihe omuma Chineke abugh ihe omuma ma obu usoro ezi uche. Isi ihe omuma a na-akpasu elu, ma nke a bụ ihe ọmụma nke ịhụnanya Chineke na nzọpụta Ọkpara. Ọ pụtara nnwere onwe ije ozi. Kraịst nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ọhụrụ "iji gosipụta ịhụnanya Chineke n'ime ndụ site n'ọrụ na omume na ekpere."
Ndị na-eso ụzọ Jizọs rịọrọ Jizọs ka ọ chebe ya na ihe ọmụma banyere Chineke mgbe ha ghọtara na ọ ga-ahapụ ha. Ma Kraist mere ka ha guzosie ike nime Nna, ka ha wee nwee ike ikwusa ozi ọma n'ụwa.
Ihe dị mkpa, ọ bụghị nchegbu ha na-adịru nwa oge maka onwe ha, kama nkwadebe ha maka ọrụ Chineke. Ihe ọmụma banyere Nna na Ọkpara na-azọpụta anyị pụọ na ego, na-eduga anyị n'ije ozi dị ala.
Jizọs kwuru, sị: Onye ọ bụla nke tụkwasịrị m obi na-arụ ọrụ, ọ bụghị naanị ikwu okwu, ma na-agbaso ụzọ nke àjà. Ruo n'ókè nke onye kwere ekwe na-agọnahụ onwe ya ma na-ebuli Kraịst elu, Ọkpara ahụ nke si na ndị nwụrụ anwụ bilie na-arụ ọrụ nime ya ma nyekwa ya ngọzi nke eluigwe. Site n'okwukwe dị otú ahụ, ndịozi ahụ nwere ike ịgwọ ma gbaghara mmehie na ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ n'aha Jizọs mgbe a wụpụsịrị Mmụọ Nsọ. Ha gọnahụrụ onwe ha, Kraịst biri n'ime ha. Ha hụrụ ya n'anya na ndị niile ha na-eto ya na omume.
E wezụga ozi nsọ ndị a, Kraist zitere ha ka ha rụọ ọrụ ọ na-enweghị ike ịrụzu n'oge obere oge ya n'ụwa. Mgbe ọ rịgoro, o zitere Mmụọ Nsọ Ya ka ọtụtụ ndị wee zọpụta site na nkwusa ha. Ụmụaka ga-amụ Nna ahụ dịka igirigi na-ada n'anwụ. Aighi ihe obla karia àmà anyi nke enyere Jizos n'obe. Site na ntukwasi obi na nka, ndi mmadu nata ndu ebighebi. Mmụọ Nsọ na-abịakwasị ndị na-arapara n'ahụ Kraịst ma mee ka ha bụrụ ụmụ Chineke ka ha wee bulie Nna ha elu ná ndụ ha niile n'ezi omume.
13. Ihe ọ bula unu gāriọ n'aham, nke ahu ka m'gēme, ka ewe nye Nnam otuto nime Ọkpara-Ya. 14 Ọ bụrụ na ị ga-ajụ ihe ọ bụla n'aha m, m ga-eme ya.
Ị na-ekpe ekpere? Kedu oke nke ekpere gị na-eche banyere nchegbu na mmehie gị? Oleekwa oge ị na-eji na-eto Chineke ma na-ejere ndị ọzọ ozi? Ị na-achọ ọdịmma onwe gị n'ekpere maọbụ jupụta ịhụnanya maka Chineke na ndị furu efu?
Ịhụnanya Chineke ọ gbanwere ekpere gị ka ị wee gọzie ndị iro gị? Nzọpụta Kraist ò mere ka ị bụrụ onye napụtara ndị mmadụ n'aha ya? Ekpere gi n'ekpere n'ekpere nke ekpere Onyenwe anyi? Ka ị na-anọgide na-akpọrọ ndị ụfọdụ asị, ọ bụghị na-agbaghara ha njehie ha?
Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere n'aha Kraịst, ị ga-adị ndụ ma chee echiche dịka mmụọ ya, dịka ọ chọrọ, obi gị ga-ejupụtakwa n'echiche ọmịiko.
Kraist naenye nkwa nke n'eme ike na ngosi nke elu igwe. Ọ na-agba nkwa a na ọnọdụ doro anya, "Ọ bụrụ na i meghere onwe gị n'okwu m, ka ha wee gbanwee gị, m ga-adị ike ma dị ukwuu n'ime gị, m ga-azọpụtakwa ọtụtụ mmadụ site na ire ure site n'okwukwe na ekpere gị. ka ị na-ekpe ekpere na nduzi nke mmụọ ma na-ekwere na m, m ga-aza ya ozugbo."
Nwanna, chee echiche ekele maka isi ihe dị n'aka Jizọs tinyeworo n'aka gị. Meghee akụ nke eluigwe n'ekpere. "M ga-agbadata ndị agbata obi gị na ndị enyi gị ngọzi na nzọpụta na ihe ọmụma nakwa nchegharị na enyemaka." Na-ekpegara Jizọs ekpere ma rịọ ka ọ họrọ ndị ohu si mba gị ma mee ka ha bụrụ ụmụ Chineke. Ike agwụla gị n'ekpere; okwukwe gị bụ ụzọ isi zọpụta mmadụ. Kwere azịza a ka ị na-ekpe ekpere; kelee ya maka nzaghachi ya. Jụọ ụmụnna gị ndị nwoke na ndị nwanyị ka ha sonyere gị n'ekpere na okwukwe. Ejila otuto na ofufe. Kpee ekpere ka O wunye Mmụọ nke ekpere n'isi gị.
Ọ bụrụ na ị chere na Jizọs azaghị ekpere gị, chegharịa ma kwupụta mmehie gị, mebie ihe mgbochi nke ekpere, ka o wee mee ka ị dị ọcha. Ọ ga-enye gị ikikere iji weta ụwa n'elu ụwa. Mgbe ị na-amalite n'ekpere na okwukwe na àmà, ị na-eto Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, nye anyị mmụọ nke ekpere, ka anyị wee buru ụzọ chee banyere onwe anyị, kama chee echiche banyere ndị anyị ma ma ọ bụ amaghị. Mee anyi ndi kwere ekwe ekpere, ka i wee chebe ndi ikwu anyi. Ana m eto gị; I meghere eluigwe maka anyị na-awụkwasị anyị onyinye gị na onyinye gị. Ka e nye aha Nna otuto site na omumu nke otutu umuaka ime mmuo. Ka e doo aha gi nso site n'omume ha n'idinso na ike nke Mmo Nso.
Page last modified on March 05, 2020, at 06:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)